Khudbaddii kuleeylaha ee hogaamiyaha xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Khudbaddii kuleeylaha ee hogaamiyaha xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga
Xalku maahan un khidmadda oo la dhimo
La daabacay måndag 26 augusti 2013 kl 11.21
Hogaamiyaha xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadiga Stefan Löfven ayaa ku sheegay khudbaddiisii kuleeylaha ee uu maalintii axadda ee 25-kii bisha agoosto ka jeediyay beerta nasashada ee "Vasaparken" in xisbigiisu qoondeeynayo baabi'inta nidaamka dhaqaalaha howl-gabka ee lagu magacaabo PPM (premiepensionssystemet).
- Dad badan ayaa kolka ey furaan baqshadda midabka liinta (orange kuvertet) ku fekera ereyadii majaajiliistaha Anders Westin oo uu ku sheegay: "halka waxaa la furey baqshaddii midabka liinta. Waxaad mooddaa iney ku yaalaan lambarro kuwii albaabka lagu galayey." Ma ahan wax soconaaya. Waa in la qirto in habka PPM uu noqday mid lagu guul-dareeystey. Waxaa la gaarey xilligii la masixi lahaa, oo waan ku raacsannahey, sida uu sheegay Stefan Löfven.
Löfven ayaa ka hadlay dhaleeceeymihii ugu dambeeyey ee loo soo jeediyey nidaamka abaal-marinta gunnada howl-gabka (premiepensionssystemet) isagoona ballaan qaaday in xisbigiisu ka ambaqaadi doono sidii loo baabi'in lahaa nidaamkaa howlaha ey xisbigiisa iyo xisbiyada garabka midig kaga wada xaajooneyaan middaa.
Khudbaddiisii kuleeylaha ee uu Stefan Löfven ka jeediyay beerta Vasaparken ayuu sidoo kale ku matalay hogaamiyaha xisbiga Mudaraatka Fredrik Reinfeldt (Fredrik på taket) jilaaga buugagta carruurta ee Karlsson-ka saqafka (Karlsson på taket):
- Caqabad walba, xilli walba - ayuu xalku isku mid yahay: In khidmadda la dhimo. Miyaanay jirin cid u sheegi karta Reinfeldt in xalkaasi aannu ahayn mid shaqeeynaya.
Hase yeeshee uu Stefan Löfven ereyadiisii ku xigey sheegay in aannu diyaar u ahayn xisbigiisu iney dib uga laabtaan khidmad dhimista tallaabo ee shanaad, haddii uu maamulka dawladda ee iminka jiraa hir-geliyo middaa. Khidmad-dhimista la joojin doono ayaa ah midda tallaabada lixaad.
Stefan Löfven ayaa sidoo kale khudbaddiisa kaga hadlay xaaladda iskuullada. Isagoo ayna u muuqatay tartanka doorashada ee sannadka foodda innagu soo haya dalka ka dhici doona ayuu jawaab middaa ka siiyay ardeyda sannadka foodda innagu soo haya:
- Wuxuu ahaa tabbeele (Boor) ay ku xar-dhan yihiin ereyo aad u qiima badan "Iska jir Björklund (ahna wasiirka tacliinta) waayo waa annaga cidda codeeyn doonta markan".
Xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadiga ayaa sidoo kale soo jeediyay fikir hor leh ee la xiriira in degmooyinka awood loo siiyo sidii ey ku uga hor-tegi lahaayeen dugsiyada faraha badan ee la fureyo:
- Maanta ayuu jiraa heshiis ey lix xisbi wada gaareen ee u dhexeeya xisbiyada garabka midig, xisbiga Doogga iyo Sooshiyaal-dimoqoraadiga ee la xiriira siyaasadda iskuullka. Waxaan ka tallaabo-qaadayaa in heshiiskaasi uu halkiisii ka sii socdo. Ma aamin-sani in fikirka uu Stefan Lövfen soo jeediyay uu leeyahay wax cusub, sida uu sheegay Jan Björklund (FP), wasiirka tacliintu.
Hase yeeshee Stefan Löfven ayaan fikirkaa la qabin Jan Björklund:
- Waxaa jira mabaadiida qaar iskuulka la xiriira oo aannu ka mideeysan nahey xubnaha guddida ee iskuullada madaxa-bannaan - hase yeeshee guddigu uma aanu tallaabo qaadin sidii looga baahnaa. Midda eynaan isku raacsaneyn ayaa ah in awood loo siiyo maamullada degmooyinka iyo dawladda iney is hor-taagaan abuuridda iskuullada faraha badan. Wuxuu guddigu dooneyaa inuu halkiisii ka sii socdo suurtagalka ah in iskuulladu ey busaaradeeysan karaan, sida uu sheegay hogaamiyaha xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadiga Stefan Lövfen.